Nagu saabsan | Warshadaha Kylin
Laga soo bilaabo 1995, oo ah shirkad shatiyeysan, toos ah oo xirfadle ah Shiinaha, Shirkadda Kylin waxay noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya warshadaha. OEM / ODM soo saaraha iyo dhoofiyaha ku takhasusay soo saarista ciyaaraha guddiga, kaararka kaararka, kaararka lagu ciyaaro, qaybaha ciyaarta, boodhadhka farshaxanka jilicsan, sanduuqa baakadaha iyo qalabka. Waxaan wadnaa afar warshadood oo wax soo saar oo ay ka mid yihiin; daabacaadda, alwaax, qadaadiic & caag.
Waxaan iskaashi la leenahay in ka badan 10 qaybood oo warshado xirfadeed u leh soo saarista iyo dhoofinta ku dhowaad 1 milyan oo gogo 'oo ah alaabada ciyaarta ah sanadkiiba. Waxaan khibrad u leenahay shaqaale, qalab heer caalami ah iyo adeegyo shaqsiyeed si looga caawiyo macaamiisheenna inay helaan adeeg buuxa oo ah guddiga wax soo saarka iyo kaararka cayaaraha iyo kuwa kale oo badan.Dhammaan qalabkayagu wuxuu ka mid yahay kuwa ugu fiican adduunka si loo hubiyo alaabada tayada sare leh. Kumbuyuutarradeena casriga ah, qalabka saxaafadda ka hor iyo qalabka wax lagu daabaco ayaa si joogto ah loo cusbooneysiiyaa si loola jaanqaado tiknoolajiyaddii ugu dambeysay ee warshadaha daabacaadda iyo baakadaha si aan u hubinno inaan soo saarno oo keliya shaqada ugu tayada sareysa.
Waaxeena Filimku waxay ku qalabeysan tahay processor saxan otomaatig ah, qaab soo-gaadhis ah, daabacad xiriiriyaha filimka, feerka filimka, iyo feedhka saxanka PS Waxaan leenahay dhamaan qalabka post-press sida mashiinka riixaya mashiinka, laminator guddiga kaarka, mashiinada wax gooya iyo goynta, mashiinada goynta otomaatiga ah, mashiinada wax lagu dhejiyo, mashiinada goynta korontada korontada, PP Laminator, UV mashiinada laba-geesoodka ah ee saliida gudbinaya, iwm. Warshadeena balaastikada ah waxay leedahay 10 mashiin oo la isku duro oo leh awoodo badan oo kala duwan. Waxaan leenahay waaxda OEM oo leh farsamo yaqaanno takhasus gaar ah u leh horumarinta wax soo saarka iyo sidoo kale daabicitaankeena iyo tas-hiilaadka lagu buufinayo meesha.
Adeegyada kale ee la xiriira ee aan bixin karno waxaa ka mid ah abuurista jeesjees, sawir farsamo, feylallo 3D ah iyo wax isku duro oo la isku duro. Waxaa jira in ka badan 500 oo wasakhahaasi ah oo jira oo ku jira aqoon isweydaarsigeenna si ay u soo saaraan ku dhowaad dhammaan noocyada qaybaha ciyaarta ee la xiriira warshadaha ciyaarta. Waxaan ku takhasusay soo saarista backgammon, roulette iyo qalabkooda. Caag The caadadii, alwaax iyo wax soo saarka biraha waxaa laga heli karaa iyada oo ay sabab u tahay waayo-aragnimo weyn our in industry ee irbado caag la xirrira, dhinta-shubay, dharbaaxo la xirrira, samaynta samaynta, samaynta vacuum, wax soo saarka acrylic, daabacaadda kala iibsiga kulaylka, silkscreen, daabacaadda suuf, shaabad kulul , faashad faakiyuum ah iyo waxyaabo kaloo badan.
Waxaan aaminsanahay in wada xiriirka guuleysta ee soo saarayaasha iyo macaamiisha uu ku saleysan yahay isku halaynta iyo daacadnimada. U hoggaansamida adag ee mabda 'ayaa noo oggolaaneysa inaan si joogto ah ula kulanno una dhaafno waxyaabaha ay ka filayaan macaamiisheennu. Waxay sidoo kale ka dhigeysaa macaamiisheenna inay soo noqdaan wixii intaa ka badan.
Faa'iidadayada gaarka ahi waa qiimeyn dhab ah oo toos ah Shiinaha, badeecooyin wanaagsan oo aamin ah, isgaarsiin shaqsiyeed iyo masuuliyad weyn iyo bixinta waqtiga.
Warshadaha Kylin waxay si diirran u soo dhaweynayaan macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah, macaamiisha gudaha iyo dibaddaba inay soo booqdaan oo ay kormeeraan shirkaddayada.
Mabaadi'dayada hagitaanku waxay siinayaan kalsooni, daacadnimo, wadashaqeyn iyo daaweyn-maskaxeed dhammaan macaamiisha iyagoo ah shirkad wanaagsan qaybahayada wax soo saarka xirfadeed. Waxaan nafteena u huraynaa horumarinta joogtada ah ee howlaheena, wax soo saarkeena iyo adeegyadeena.